Articles tagged 'culture week'
Music stars to grace Culture Week 24 May 2017 HARARE - Rising stars Andy Muridzo, Selmor Mtukudzi and Romeo Gasa are among scores of artistes who will feature in the inaugural Culture Week gig set for the Harare Gardens tomorrow. The free event, being organised by the Harare province of the National Arts Council of Zimbabwe (Nacz), will a...
Muridzo to perform at Culture Week launch 20 May 2017 HARARE - Rising music star Andy Muridzo will be the star performer at the official national launch of the Culture Week to be held today at Nyava High School in Musana, Bindura Rural District. The event, to be officiated by Rural Development, Promotion and Preservation of National Culture and H...
20 acts celebrate Culture Week 17 May 2017 HARARE - More than 20 arts acts will take part in Culture Week celebrations at Glen View 1 Hall in Harare on next Monday. The showcase is part of countrywide arts related activities run by National Arts Council of Zimbabwe (Nacz). In Glen View 1, the participating artistes will major in mus...
Culture week launch beckons 11 May 2017 HARARE - The 2017 Culture Week commemorations, which will run throughout Zimbabwe from May 20 to 26, will be officially launched at Nyava High School in Musana, Bindura Rural. According to National Arts Council of Zimbabwe (Nacz) spokesperson, Cathrine Mthombeni, the national launch of the eve...
Marabini, Black Umfolosi set for Culture Week 18 May 2016 BULAWAYO - Imbube and mbaqanga outfit Black Umfolosi, poet Albert Nyathi and Afro-fusion star Jeys Marabini will perform at the national launch of the Culture Week that will take place at Godlwayo Culture Centre in Filabusi on May 21, 2016. In a statement released yesterday, National Arts Coun...